hababka wax soo saarka ee birta xabagta huruud ah
Iron oxide yellow waa midab huruud huruud ah oo huruud ah. Cufnaanta qaraabada ayaa ahayd 3.5. Waxyaabaha kiimikada ahi way deggan yihiin. Cabbirka walxaha waa 0.01-0.02 μ M. Waxay leedahay aag gaar ah oo gaar ah (qiyaastii 10 jeer oo caadi ah oksaydhka), nuugista ultraviolet xoog leh, iska caabbinta iftiinka, jawiga ...
hababka wax soo saarka ee birta oxide cas
Waxaa jira laba geeddi-socod oo wax soo saar oo muhiim ah oo ah oksaydh cas: qalalan iyo qoyan. Maanta waxaan eegeynaa labadan geeddi-socod. 1. On geedi socodka qalalan habka qallalan waa dhaqan iyo asalka habka wax soo saarka casaanka oxide ee Shiinaha. Faa'iidooyinkeedu waa habka wax soo saarka fudud, habka gaaban ...
Saldhigga cusub ee soo saarista midabka birta ah ee birta ee Shijiazhuang Shencai warshaddii midabka ayaa la soo saaray
Shijiazhuang Shencai Midab Factory aasaasay 2003.Waxaan leenahay weyn Iron Oxide Midabka Production Production (Hebei Chengyu Pigment Co., Ltd), waxa uu ku yaalaa Ningjin Salt Chemical Warshadaha Park, Gobolka Hebei, waa a park kiimikada warshad gobolka, si rasmi ah waa in wax soo saar. Iyadoo saddex pro ...